Rudzi: Без рубрики
Maitiro ekudzoreredza tsamba uchishandisa nhamba yefoni? ndiani akatsungirira dambudziko iri ndinyorere ini! Hazvipe mhinduro. Zvisungo zvasara zveyi Lena. Kukanda mumitambo. Inogumbura Kana iwe uchida kudzoreredza password yako, ...
Nzira yekubata sei Mail.ru rutsigiro sevhisi? Mhoro! ndokumbirawo mundibatsire kudzoreredza password yangu, vabati vakachinja data rangu rese. Ndakaedza kuidzorera kuburikidza nebasa rekutsigira, asi ivo vanoti hauna ruzivo. Ndinokwanisa…
Maitiro ekugadza chapupu pamuchato muavatar ?! hurray goridhe ipa nyora mu4 makomendi enda kumash kana sachet wokudhinda f5 uye sarudza kuti yakawanda sei yaunoda 4 hurray goridhe ipa nyora
Chii chinonzi nhamba yekutengesa, uye ndingaiwana kupi? Mhoro, mawaniro ekuita mubhadharo, ini ndoziva iyo risiti nhamba. Mhoro. akaita chinja kukadhi neYandex-mari. mari yakasara asi haina kusvika pakadhi. ...
Tinoda runyorwa rwevose 26 mavara ebasa "Nhamo kubva kuWit"
Tinoda runyorwa rwevose 26 mavara ari mune basa "Nhamo kubva kuWit" naA A. Griboyedov. Nhamo kubva kuWit A mutambo mune zviitiko zvina mundima KUSVIRA: Pavel Afanasyevich Famusov, Sofia, maneja wenzvimbo yehurumende ...
ndinoshandura sei email yangu kero? Unogona chete kushandura chimiro, asi iyo e-mail pachayo, zvinosuruvarisa, haigone kuchinjwa. Gadzira imwe nyowani, asi usazvidya moyo) Hapana kero yeiko? kana tsamba, tanga rimwe bhokisi retsamba ...
Maitiro ekudzoreredza akadzimwa maemail ??? # 1Usati wadzorera dzadzimwa mameseji, iwe unofanirwa kuyeuka chaizvo kuti ruzivo rwacho rwakabviswa sei uye kwarwakawanikwa. Saka, kana iyo data yaive mumafolda akadaro, ...
Ndingaite sei kuti font inge yakashinga? Html ma tag anoshandiswa. Ini handinzwisise mashandisiro avo. hmm aaaaa Italic Nematagi Iwe unovhara iwo mavara kumativi ese, nekudaro uchiita kuti abude. Pakati pematagi uye zvinyorwa ...
zvinoita here kutumira tsamba ANONYMOUSLY? Nhanho yekutanga: enda kunzvimbo isingazivikanwe, semuenzaniso Internet cafe Nhanho yechipiri: Tumira tsamba Nzira imwe: Kutumira isingazivikanwe email, unogona kunyoresa bhokisi nyowani retsamba kumwe kunhu, zita ...
kuti sampuro yekurapa yekuenzanisira inofanira kutaridzika sei sebasa kumaodzanyemba kuchamhembe mhinduro ndeyechinyakare. fomu nyowani yekuchamhembe -302-n Irina ruzivo urwu rwunobva kupi? ndiudze pliz yakakosha kwazvo. Ichi chitupa chekurapa ...
Chii chinonzi mushandisi account? Rondedzero yeakaunzi ine ruzivo rwekuti mushandisi anozivisa nezvake kune imwe komputa system. Sezvifananidzi muhupenyu hwezuva nezuva, iyo slang mazwi account uye account inogona kushandiswa, kubva ...
Ini ndakakanganwa zita rangu rekushandisa nephasiwedi mukubatana. Sei kupinda peji racho? ne e-mail Hapana. Kuti utange, enda kune iro remberi peji resaiti mukutaurirana, pasi peminda uko kwaunopinda iko kupinda uye password - ...
kudzoreredza bhokisi retsamba pa mail.ru Mushandisi anofanira kuzvimiririra kudzorera bhokisi rake retsamba kubva kuchinhu chake. Ini ndinongogona kupa mazano. Verenga rairo apa kana zvisingaite kudzoreredza kuwanikwa iwe pachako: http: //otvet.mail.ru/question/172719793 Kuwana tsamba ...
Chii chinonzi trolling? iwo makumi mapfumbamwe kubva muzana emameseji pa "mhinduro" Trolling hutsinye mu internet. Mune internet terminology, troll munhu anotumira zvisina hunhu kana zvinokanganisa mameseji paInternet, semuenzaniso, mukukurukurirana ...
Chii chinonzi kusvibiswa? Aya ndiwo maitiro ekudzikira kwehunhu hwechinhu nekufamba kwenguva, kufamba kumashure, kudzikira zvishoma nezvishoma, kuderera, kuderera kwehunhu, kuparadzwa kwechinhu nekuda kwesimba rekunze zvinoenderana nemitemo yechisiko nenguva. Kushatiswa,…
Ndeupi mubairo unopihwa muAvatar kana iwe ukapinda mukati mezana remazuva vanhu ini ndiri mukuvhunduka .. kwaive nechirongwa chekutora goridhe mahara! Zviri nyore kwazvo! Uye hazvina kuoma zvachose! Kazhinji, iyo mibairo zvakare yakanaka ...
Zuva rese rekupuruzira neapasi scapula kuti chingave chii. Zvirwere mune marwadzo pasi pejasi reruboshwe reza: - Chiratidzo chinotungamira chegastric ulcer kurwadziwa, kunozivikanwa nekuwanda, mwaka, kuwedzera hunhu, ...
maitiro ekugadzira mail.ru peji rekumba pane desktop yako Mhoro! Gadzira Mail.Ru peji rako rekumba Kuti ugare uchikwanisa kuverenga nekukurumidza tsamba dzako uye kupindura kwavari, tinokurudzira kuti iwe ...
kubvunza sei mubvunzo pa mail.ru Pano - iwe watobvunza mubvunzo wako wekutanga)) Unofanirwa kubaya pane "bvunza" bhatani, iri mune yebhuruu musoro wepurojekiti)) uye ipapo nyora nyora mubha rebha ...
Mibvunzo ye77 mu database yakagadzirwa mu 2,318 masekondi.